Loza am-perinasa :: Nozarain’ny milina roa ny lohan’ilay tovolahy • AoRaha
Loza am-perinasa Nozarain’ny milina roa ny lohan’ilay tovolahy
Ranomaso sesilany. Io sisa no nanamparan’ireo fianakaviany ny alahelo an-Drakotomandimby Rolland Jacquot, tovolahy tra-doza teo am-perinasa tao amin’ny orinasa iray fanamboarana taratasy fitondra any amin’ny trano fivoahana, teny Ambohimanambola, omaly vao maraina be. Teo am-panadiovana ny milina lehibe iray itsy tovolahy vao 20 taona monja itsy no nihodina tampoka ilay milina, vokatry ny fiverenan’ny herinaratra. Voadidy amin’ny lohany izy ka namoy ny ainy teo no ho eo.
Tovolahy tsotra sady mazoto miasa i Jacquot, araka ny fitantaran’ ireo fianakaviany. Tampoka teo amin’izy ireo ny zava-nisy, omaly. “Tokony ho tamin’ny 1 ora maraina mahery teo no nitrangan’ny loza. Tapaka ny jiro tao amin’ny orinasa niasanay mirahalahy. Nanadio ny tao anatin’ny milina lehibe iray mpamotika taratasy izy. Tamin’io fotoana io indrindra, no niverina tampoka ny herinaratra ka nihodina ilay milina. Nisy daba iray teo, dia noheveriko fa ilay daba no tafiditra tao anaty milina ka lasa aho nanapika haingana ny milina. Somary misintaka kely miala ny milina io fanapihana azy io. Rehefa nojerena anefa tao anaty milina dia i Jacquot efa tsy misy aina intsony no tao, sady nivoaka taty ivelany ny tao anaty lohany”, hoy ny fitantaran-dRabemizara Fanomezantsoa Jacky Arsène, rahalahin’i Jacquot, izay sady niaraniasa taminy.
“Manaporofo ny maha olona mendrika an’i Jacquot ny zavanisy. Ny mpiasa rehetra, rehefa tapaka ny herinaratra, dia mipetrapetraka miandry. Izy anefa tsy toy izany fa miezaka manao zavatra foana nanadio ny milina satria nanararaotra ny fotoana nahatapaka ny jiro. Toy izany ny toetrany rehefa miasa”, hoy indray Randrianarisoa Dieu Donné, rahalahin-drain’Itompokolahy.
Kilasy voalohany teny amin’ny lisea i Jacquot no nijanona tsy nanohy fianarana intsony. “Mbola saika hanohy fianarana izy, saingy noho ny fahasahirananay ray amandreny dia tsy afaka intsony. Telo mirahalahy ireo zanako. Izy no eo afovoany. Tsy mbola manambady izy. Rehefa tsy afaka nianatra intsony i Jacquot dia niasa. Tsy mbola nieritreritra ny hanambady izy fa ny hitady vola aloha. Indrisy anefa, namoizany ny ainy izany”, hoy kosa Ramarolahy Denis Arsène, rain’ilay tovolahy.
Efa niasa tao amin’io orinasa mpamokatra taratasy fitondra any amin’ny trano fivoahana io i Jacquot, herintaona lasa izay. Nisy naratra tamin’ny tanany dia nijanona izy. Naratra vokatry ny asa ihany izy tao amin’ny orinasa nahavoa azy fanindroany izao. Tsy mba nanaiky hipetrapotsiny izy na teo aza izany fa nitady asa. Niasa tao amin’ilay orinasa mpanodina hoditra izy. Nantsoin’ny mpampiasa azy tao amin’ny orinasa nahafaty azy indray i Jacquot hoe tokony hiverina miasa amin’izay. Noho izay no antony nampiverina azy niasa tao indray, vao tsy ampy iray volana akory izay”, hoy hatrany ny rain’itsy tovolahy maty am-perinasa itsy.
Mpanomana ny paty hahodina ho lasa taratasy fitondra any amin’ny trano fivoahana no asan’i Jacquot eo amin’io milina io. “Tsy nisy nanam-po hoe hahafaty azy ilay milina. Hitako lesoka ny tsy tokony hametrahana lavitra ny fitaovana famonoana sy fandefasana ilay milina. Raha tsy teo akaiky teo ny zanako lahy, zokin’i Jacquot nanapika haingana ny milina, tamin’io fotoana io, dia mety efa lasa paty ny zanakay”, hoy Ramarolahy Denis Arsène sady latsaka ny ranomasony.
Fiantohana ny lany rehetra
Nanamafy ny teo anivon’ilay orinasa rehefa nanontaniana fa: “maty am-perinasa tokoa i Jacquot”. “Nandray fepetra avy hatrany izahay nampandre mpitsabo sy ny mpitandro filaminana nijery ny zava-nisy rehefa nitranga ny loza. Vita ny fitanana an-tsoratra nataon’izy ireo dia naterin’ny orinasa tany amin’ny fianakaviany ny razana, tokony ho tamin’ny 5 ora maraina. Iantohan’ ny orinasa avokoa ny lany rehetra mandritra izao fotoan-tsarotra eo anivon’ny fianakaviana izao”, hoy Randrianarivony Emmanuel, tompon’andraikitry ny magazay ao amin’ilay orinasa nitrangan’ny loza eny Ambohimanambola.
“Efa mianjady aminay izao ny fahoriana. Tsy misy azo atao afa-tsy ny maneho ny alahelo. Zakainay ny zava-misy”, hoy fotsiny ny rain’i Jacquot teo am-pamaranana. “Maniry ny mba hijeren’ny orinasa ny ray aman-drenin’i Jacquot izahay satria nanampy azy ireo tao io zanany io, no izao lasa tampoka izao. Marina fa tsy nisy taratasy fifanarahana amin’ny maha mpiasa azy saingy amin’ny maha Malagasy antsika dia mahay mandinika sy mandala izany atao hoe fihavanana izany”, hoy Randrianarisoa Dieu Donné, dadatoany.
Nandray ny andraikiny ny orinasa niasan’i Jacquot, araka ny fanazavan’ilay tompon’andraikitry ny magazay
Ranomaso ny an’ireo ray aman-drenin’i Jacquot (havanana), omaly teny Masindray-Ambohimanambola.
Loza nihatra tamina lpianakavy :: Zaza mianadahy maty voahosin’ ny kamiao niaraka tamin-dreniny
Raharaha vono olona :: Karohin’ny Fitsarana indray ilay depiote nivoaka ny fonja